Fahazaran-dratsy izay mety hamarana ny mpivady | Bezzia
Maria Jose Roldan | 05/04/2021 22:00 | fifandraisana
Matetika dia amin'ny mpivady atambatra sy voalamina ara-potoana, misy andiana fahazaran-dratsy natsangana izay tsy tsara amin'ny ho avin'ny mpivady. Tamin'ny voalohany dia mety tsy dia zava-dehibe ireo fahazarana ireo, kanefa, tokony holazaina fa rehefa mandeha ny fotoana dia mety hisaraka tsikelikely ny firaisan'ny olona toy izany.
Raha tsy ajanona ara-potoana ny fahazarana toy izany, dia mety hampidi-doza ireo singa manan-danja ao anatin'ny mpivady toy ny amin'ny fahatokisana na fanajana. Mba tsy hitrangan'izany dia ilaina ny mamantatra ireo fahazarana ireo ary mamarana azy ireo. Ireto misy ohatra amin'ny fahazaran-dratsy mety hitranga amin'ny fifandraisana.
2 Ny fisian'ny lolom-po
3 Ady ampahibemaso
4 Tsy fisian'ny fandokafana
Fankahalana hatrany ny fampitahana ary tokony tsy hampiasa azy ireo matetika ao anatin'ny mpivady ianao. Samy manana ny kilemany sy ny hatsarany ny olona tsirairay avy ka tsy ilaina ny mampitaha. Tsy tokony hatao ny mampitaha ny tsara fa tsy ny mampitaha.
Ny fisian'ny lolom-po
Ao anatin'ny mpivady dia tsy misy lolom-po ary raha misy dia ilaina ny miresaka amin'ny mpivady mba hamahana ny raharaha. Tsy mendrika ny hamela ny helok'ilay olona hafa izany raha tsy vita amin'ny fony izany. Nalevina ny lolom-po ary tsy voavaha, afaka mitombo lehibe kokoa izy io rehefa mandeha ny fotoana ary miteraka olana lehibe eo amin'ny fifandraisana.
Ny ady eo imason'ny olon-tsy fantatra dia iray amin'ireo fahazaran-dratsy tsy maintsy sorohina amin'ny fotoana rehetra. Ny olana samihafa dia tokony hovahana amin'ny fiainana manokana fa tsy imasom-bahoaka. Fahazarana miely hatrany amin'ny ankamaroan'ny mpivady ankehitriny.
Tsy fisian'ny fandokafana
Matetika dia mahazatra sy mahazatra fa amin'ny taona voalohan'ny fiarahana dia samy mahazo dera avy amin'ny mpivady ny olona roa. Ny olon-drehetra dia tia fa ny olon-tiany dia manokana teny mahafinaritra momba ny fitiavana sy fiderana sasany. Mampalahelo fa rehefa mandeha ny fotoana dia mihena ny fiderana toy izany ary samy afaka mieritreritra ny olona roa amin'ny fotoana rehetra fa tsy manintona intsony izy mivady.
Ny resaka fialonana ao anatin'ny mpivady dia olana somary sarotra. Ny fialonana amin'ny fotoana sasany dia zavatra azo heverina ho ara-dalàna ary tsy tokony hanahirana. Na izany aza, raha lasa lavitra ny fialonana ka miteraka olana lehibe dia mety hanimba ny fifandraisan'ny olona izany. Ny fialonana dia tsy mety ho lasa fahazaran-dratsy ao anatin'ny mpivady mihitsy.
Raha fintinina, ireo karazana fahazarana ireo dia tsy tsara ho an'ny mpivady. Rehefa mandeha ny fotoana dia mety manimba ny sakaizanao ny fahazarana toy izany. Ny fahazarana dia tokony ho salama araka izay azo atao mba hahazoana antoka fa ny fifamatoran'ny roa tonta dia mihamatanjaka ary ny fitiavana manjaka noho ny karazana olana. Tokony ho fantatrao ny fomba hikarakaranao ny mpivady ary hametrahana vahaolana amin'ireo olana samihafa mety hitranga avy amin'ireo olana samihafa mety hipoitra ao anatiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Fahazaran-dratsy izay mety hamarana ny mpivady